बाढीले बस्ती नै पुरिएपछि पनि माथि देखिएको भगवान शिवको मूर्तीमा श्रद्धाभाव प्रकट गर्दै एक स्थानीय – News Book Online
असार २ गते दिउँसो सिन्धुपाल्चोकको चनौटेमा मेलम्ची बाढीमा बगिरहेको एउटा भैँसी देखियो । तर खोलाको बाढीमा बग्दै गरेको भैँसीलाई उद्धार गर्न कोही जान सक्ने अवस्था थिएन ।स्थानीय रवि खड्काले खिचेको भिडियोमा स्थानीयहरुको आवाज सुनिन्छ, ‘भैँसी जिउँदै रहेछ । अब त्यहाँबाट पनि लैजान्छ । रगत निस्किएको रहेछ । बरु त्यसरी बस्नुभन्दा जाओस् । स्वर्गमा बास होस् ।’ हेर्दा हेर्दै ढुङ्गाहरू सँगै भैँसीलाई पनि बाढीले गुल्टाएर बगाउँछ ।
सिन्धुपाल्चोकको चनौंटे क्षेत्रमा भिडियोमा कैद भएको भैँसी हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. २ किउल भन्ने ठाउँबाट बगेको थियो । किउलबाट चनौटे, ग्याल्थुम, तालामाराङ्, मेलम्ची, बाहुनेपाटी, हुँदै काभ्रेको सीमा छेउ फड्केश्वरमा पुगेको थियो ।इन्द्रवती नदीले बगाउँदै ल्याएको भँैसी सोहीदिन साँझतिर १६ वर्षका रोमन कार्की र १८ वर्षका धनबहादुर तामाङले काभ्रेपलाञ्चोकको सिमाछेउ उद्धार गरे।
असार १ गते मेलम्ची खोलामा रातभरी बाढी आयो । हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. ६ किउल, ओडारेका तारा शिवभक्तिको घर गोठ बाढीको भंगालोमा प¥यो । दिउँसो स्थानीयले भैँसीको उद्धार गर्न खोजे तर सकेनन् । असार २ गते दिउँसो ३ बजेतिर बाढीले २ वटा भैँसी बगायो ।मेलम्ची नगरपालिकाको पशु शाखामा कार्यरत भेटनरी प्राविधिक चेतप्रसाद घोरासैनीले पनि मेलम्चीमा भैँसी जिउदै बगिरहेको देखे । उनी मेलम्ची भन्दा माथिको गाउँमा भैँसी बिरामी भएकोले उपचारका लागि गएका थिए । उनी आफ्नो घर फड्केश्वर आइपुग्दा फड्केश्वरमा रोमन कार्की र धनबहादुर तामाङले उद्धार गरिसकेका थिए।
घोरासैनीले भने, ‘४ दिनमा भैँसीको निकै सुधार भएको छ । घाँस पानी खोले मज्जाले खान्छ । हेलम्बु गाँउपालिकामा बस्ने साथीसँग कुरा गरे । भैँसी धनीसँग सम्पर्क भयो । अहिले त बिरामी जस्तै देखिएको छैन । भोलिसम्म दिँदा ठीक हुन्छ कि ।’भैँसीको मुखको तल्लो भागमा ठूलो घाउ लागेको छ । शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ । पहिलो दिन भैँसीको ज्वरो १ सय ४ पुगेपनि अहिले घट्दै गएको घोरासैनीले बताए ।